Miandrandra ny Fitsarana Ambony ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Icibemba Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kreôla any Beliza Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Twi Vietnamianina Yorobà
NEW YORK—Hohenoin’ny fitsarana ao Saint-Pétersbourg ny fangatahan’ny Vavolombelon’i Jehovah hampakatra fitsarana ambony, amin’ny alakamisy 3 Mey 2018. Nisy didy nivoaka mantsy talohan’izay hoe alain’ny fanjakana ny tranon’ny sampan’izy ireo any Rosia. Trano 14 no azon’ny fanjakana alaina avy hatrany raha resy eny amin’ny fitsarana ny Vavolombelon’i Jehovah. Velaran-tany 10 hektara eo ho eo no misy an’ireo trano ireo ary 31 800 000 dolara (2 000 tapitrisa rouble) eo ho eo ny teti-bidiny.
Fananan’ny Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (WTPA) any Etazonia ny biraon’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia ary tsy natao hitadiavam-bola. Hita tamin’ilay didy nivoaka tamin’ny Desambra 2017 anefa fa tsy niraharaha an’izany ny fitsarana tao Sestroretskiy. Nomen’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia ho fananan’ny WTPA ireo trano ireo tamin’ny taona 2000. Hetra 3 tapitrisa dolara (188 tapitrisa rouble) be izao no efa naloan’ny WTPA ho an’ny Federasionan’i Rosia. Efa 17 taona mahery izay ny fanjakana rosianina no nanaiky an’izany ho ara-dalàna. Milaza anefa izao ny fitsarana ao Sestroretskiy fa tsy manan-kery ilay famindram-pananana natao tamin’ny WTPA. Vokatr’izany dia ambaran’ny fitsarana fa mbola fananan’ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia ihany ireo trano ireo. Efa nofoanan’ny Fitsarana Tampony anefa ilay foibe tamin’ny 2017. Raha resy àry ny Vavolombelon’i Jehovah amin’ity fitsarana ity, dia ho azon’ny fanjakana alaina avy hatrany ireo trano ireo.
Hatao amin’ny 11.30 maraina ilay fitsarana ao amin’ny lapam-pitsaran’i Saint-Pétersbourg, ul. Basseynaya, 6, Saint-Pétersbourg, Rosia.